Bangiga cuntada ee New Jersey wuxuu helayaa deeq ka kooban 33-kW dusha sare ee qorraxda
Goobta Cuntada ee Flemington Area, oo u adeegta Hunterdon County, New Jersey, ayaa u dabaaldegtay oo soo bandhigtay qalabkooda cusub ee qorraxda oo lagu rakibay xarig goos goos ah Nov. 18 Fantington Area Food Pantry.
Mashruucan waxaa suurta galiyay dadaal tabarucaad iskaashi ah oo dhex maray hogaamiyeyaasha warshadaha qoraxda iyo mutadawiciinta bulshada, mid walbana wuxuu siinayay shaqsiyaadkiisa.
Dhammaan dhinacyada ka qayb qaatay inay ka dhigaan rakibaadda mid dhab ah, bakhaarradu waxay leeyihiin mid si gaar ah loogu mahadcelinayo - Ardayada Dugsiga Sare ee North Hunterdon, Evan Kuster.
"Aniga tabaruc ahaan uga shaqeeya Cuntada bakhaarka, waxaan ka war qabay inay kharash aad u badan oo koronto ku bixiyaan qaboojiyayaashooda iyo qaboojiyayaashooda oo aan u maleynayay in tamarta qoraxda ay badbaadin karto miisaaniyadooda," ayuu la wadaagay Kuster, ardayga North Hunterdon High School, Class of 2022. "My aabe wuxuu ka shaqeeyaa shirkad soo saarta tamarta cadceeda oo la yiraahdo Merit SI, wuxuuna noo soo jeediyay inaan weydiisano tabarucaad si loo maalgaliyo nidaamka. ”
Marka Kusters way waydiisteen, hogaamiyaasha warshadaha qorraxda ayaa kajawaabay. Isu soo wada duub oo ku saabsan aragtidooda saameynta, wada shaqeyn buuxda oo wada-hawlgalayaasha mashruuca ah oo ay ku jiraan First Solar, OMCO Solar, SMA America iyo Pro Circuit Electrical Contracting ayaa u saxiixay mashruuca. Wadajir ahaan, waxay ugu deeqeen qalab dhan oo qorraxda ku shaqeeya bakhaarka, iyagoo yareynaya biilka korontada ee sannadlaha ah $ 10,556 (2019). Hadda, nidaamka cusub ee 33-kW wuxuu u oggolaanayaa lacagahaas in loo qoondeeyo soo iibsiga cuntada ee beeshooda - oo ku filan diyaarinta 6,360 cunto.
Jeannine Gorman, oo ah agaasimaha fulinta ee Goobta Cuntada Flemington, ayaa carabka ku adkeeyay culeyska hantidan cusub. "Doollar kasta oo aan kubixino biilkeena korontada waa hal doolar oo aan ku qarash gareyn karno bulshada," ayuu yiri Gorman. “Waxaan fulinaa howsheena maalin kasta; waa dhiirigelin inagu ah inaan ogaano in xirfadlayaashu ay daryeelaan ku filan inay ku deeqaan waqtigooda, kartidooda iyo sahaydooda si ay nooga caawiyaan inaan sii wadno u adeegida baahiyaha bulshadeena. ”
Bandhiggan deeqsinimadu ma noqon karayn mid waqti ku dhisan, marka la fiiriyo saameynta ba'an ee cudurka faafa ee COVID-19. Intii u dhaxeysay bilihii Maarso iyo Maajo, waxaa jiray 400 oo diiwaangeliyeyaal ah bakhaarka, lixda bilood ee ugu horreysa sanadka, waxay arkeen koror dhan 30% macaamiishooda. Sida laga soo xigtay Gorman, "rajo beelka wajiyada qoysaska maadaama ay u baahnaayeen inay caawimaad weydiistaan" waxay caddeyn u tahay in aafadu ay yeelatay saameyn curyaamisay, oo gaarsiisay heerar badan oo baahiyo aysan horay u soo marin.
Tom Kuster, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda 'Merit SI' iyo Evan aabihiis, ayaa ku faanay in uu hormood ka noqdo mashruuca. Kuster wuxuu yiri: "wajahaysa cudurkan faafa aduunka shaki la’aan wuxuu ahaa mid cabsi gelinaya dhamaan dadka mareykanka ah, laakiin waxay si gaar ah ugu adkaatay bulshooyinka aan heysanin iyo kuwa halista kujira". "Marka la eego Merit SI, waxaan aaminsanahay doorkeena ka muwaadiniinta shirkadaha inay tahay inaan kulanno xoogag isla markaana aan amaahino meel kasta oo ay baahi weyn u jirto."
Merit SI wuxuu siiyay naqshadeynta kaabayaasha iyo injineernimada, laakiin sidoo kale wuxuu u dhaqmay sidii isku-duwaha, isagoo keenay ciyaartoy badan oo muhiim ah guddiga si ay u dhacdo. "Waxaan u mahadcelineynaa la-hawlgalayaasheena ku deeqay waqtigooda, khibradooda, iyo xalalka mashruucan, kaas oo si weyn u caawin doona bulshadaan inta lagu guda jiro qabrigan iyo waqti aan horay loo arag," ayuu yiri Kuster.
Noocyada casriga ah ee filimada qoraxda khafiifka ah waxaa ku deeqay First Solar. OMCO Solar, oo ah beel iyo adeeg baaxad weyn leh oo loo yaqaan 'OEM of tracker solar' iyo xalal qashin-qubka, ayaa lagu rakibay qoryaha bakhaarka. SMA America waxay ugu deeqday rogayaasha Sunny Tripower CORE1.
Qandaraaska qandaraaska korantada Pro wuxuu rakibay safka, isagoo ku deeqaya dhammaan korantada iyo shaqada guud.
"Waxaan la yaabay wada shaqeynta ka dhaxeysa shirkado badan oo mashruucan u heellan… Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhamaan deeq bixiyeyaasha, iyo shakhsiyaadka suurta galiyay tan," ayuu yiri Evan Kuster. "Waxay noo ahayd iftiin wanaagsan oo aan dhammaanteen ku caawin karno deriskeenna iyadoo aan iska indha tiraynno saameynta isbeddelka cimilada."